Sep-27 तारिख 01:33 बेलुका
सर्वोच्च अदालतको इजलासमा शुक्रबार नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) नपठाएपछि बेन्च–बार टक्कर मात्र उजागर भएको छैन, एमिकस क्युरी छनोट प्रक्रिया र उनीहरूको भूमिकाका विषयमा बहससमेत सुरु भएको छ । कतिपय विज्ञले एमिकस क्युरी बोलाउने अदालतको आदेशदेखि नै समस्या रहेको औंल्याएका छन् । संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी मुद्दा शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा तोकिएपछि नेपाल बार र सर्वोच्च बारले एमिकस क्युरी नपठाएका हुन् । जसका कारण सुनुवाइ नै हुन सकेन । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलले गत भदौ १७ मा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरी झिकाउन आदेश दिएका थिए । सर्वोच्चले फेरि एमिकस क्युरी झिकाउन आदेश गरेको छ । यो घटनाक्रममा अदालतको चौघेरोभित्र सीमित रहँदै आएको एमिकस क्युरीजस्तो प्राविधिक विषयमा आमचासोसमेत बढेको छ ।
अदालतले आफूसमक्ष आका विवाद निरूपणका लागि पक्ष र विपक्षबाट पेस हुने तर्क मात्र पर्याप्त नहुने महसुस गर्‍यो भने सहयोग माग्दै विषय विज्ञ स्वतन्त्र व्यक्ति बोलाउने चलन छ । त्यस्ता विज्ञ व्यक्तिहरूलाई एमिकस क्युरी भनिन्छ । उनीहरूले विवादको पक्ष वा विपक्षका रूपमा नभएर विषय विज्ञको रूपमा स्वतन्त्र विचार दिने र त्यसबाट अदालतलाई ‘सही’ निष्कर्षमा पुग्न सहयोग पुग्ने ठानिन्छ । यो समग्र प्रक्रियालाई एकातर्फ अदालतले स्वतन्त्र व्यक्तिको विज्ञतालाई कदर गरेको मानिन्छ भने अर्कातर्फ विज्ञ व्यक्तिले निःशुल्क रूपमा आफ्नो विज्ञता अदालतलाई उपलब्ध गराएर इजलासप्रति सम्मान दर्शाएको रूपमा लिइन्छ । तर जानकारहरू नेपालमा यसको प्रयोगमा प्रशस्त अन्योल, द्विविधा र समस्या रहेको बताउँछन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी अदालतले बारमार्फत एमिकस क्युरी झिकाउने अभ्यासलाई नै त्रुटिपूर्ण मान्छन् । ‘अदालतले एमिकस माग्दा मलाई यो प्रश्नमा सहयोग चाहिएको हो, फलानो व्यक्तिले त्यसमा सहयोग गर्न सक्छ भनेर स्वतन्त्रपूर्वक बोलाउँदैन । समस्या त्यहीँ सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतले बार एसोसिएसनसँग माग गर्छ । हाम्रो बारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा वकिलहरूबीच भागबन्डा गरिदिन्छ । एमिकस दिँदा कसरी इजलासलाई अनर (सम्मान) गर्ने भन्ने परम्परा र संस्कार दुवै देखिएको छैन ।’ संविधानविद् अधिकारी अदालतलाई जुन प्रश्नको जवाफका लागि सहयोग चाहिएको छ, त्यो उल्लेख गरेर विषय विज्ञ र विश्वसनीय व्यक्ति तोकेर अनुरोध गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
अधिवक्ता मेघराज पोखरेल एमिकस क्युरीबारे अदालतको बुझाइमै समस्या देख्छन् । ‘हाम्रा अदालतले वकिललाई मात्र एमिकसका रूपमा योग्य देख्छन् । जुन विषयमा विवाद भएको हो, त्यसको विज्ञलाई झिकाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘बारमार्फत झिकाउँदा कसलाई पठाउने भन्ने विवादले बारकै कमिटीमा लफडा हुन्छ । त्यसपछि उपयुक्तभन्दा पनि आफ्ना मान्छे पठाउने गरिन्छ ।’ अहिलेसम्मको अभ्यासमा बारको नेतृत्वले छानेका वकिल मात्र एमिकसका रूपमा इजलास पुग्ने गरेको देखिन्छ । बारले आफ्ना सदस्यभन्दा बाहिरबाट छान्ने गर्दैन । नेपाल बार र यसका इकाइहरू राजनीतिक रूपमा विभाजित भएका कारण पार्टीको सहभागिताअनुसार एमिकस पनि भाग लगाउने गरिन्छ । अदालतले अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्तालाई मात्रै झिकाउने आदेश गर्छ । अदालतले विज्ञ खोज्नतर्फ कुनै चासो दिएको देखिँदैन । ‘सार्वजनिक सरोकारका विवादमा मुद्दामा जित्ने वा हार्ने पक्षबाहेकका सरोकारवालासमेत हुन्छन् । अदालतले उनीहरूको सरोकार पनि सुन्नुपर्छ । इजलासमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको समुदायको पनि सहभागिता होस् भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसो गर्न बारमा मात्र निर्भर भएर सम्भव हुँदैन,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘अदालतले एमिकसका रूपमा अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता मागेको होइन । पक्ष र विपक्ष दुवैसँग नभएको ज्ञान मागेको हो, जुन वकिलसँग मात्र हुँदैन ।’
यस्तो उदाहरण विशेष अदालतमा पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्योट आयोगको निर्णयमाथि अन्य पदाधिकारीसहित आयोगका सदस्य चूडामणि शर्माविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । विशेषले राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा बारबाट एमिकस क्युरी खोज्यो । बारले २०७५ माघ २७ का लागि वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मीलाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठायो । त्यो दिन सुनुवाइ भएन । रेग्मी २०७६ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए । त्यसपछि दुई पटकसम्म बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैध र अधिवक्ता मोतीराम गौतमलाई एमिकस तोक्यो । उक्त मुद्दा हालसम्म पनि फैसला भएको छैन । एमिकस क्युरीले के योगदान गरेका छन् भन्ने स्पष्ट छैन । अदालतले एमिकस क्युरीको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा कुनै मापदण्ड बनाएका छैनन् । संविधानविद् अधिकारी ‘न्यायाधीशले आफू स्पष्ट हुन चाहेको प्रश्नसहित एमिकस बोलाउनुपर्ने’ बताउँछन् । ‘अदालतले पक्ष र विपक्षबाट यी प्रश्नको जवाफ पाएनौं, त्यसैले तिमीलाई बोलाएको हो, अब तिमीले यो विषयमा इजलासलाई स्पष्ट पार्देऊ, भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एमिकसले पक्ष/विपक्षकै तर्क दोहोर्‍याउँछ भने ऊ किन चाहियो ? अदालतमा न्याय नपाएका हजारौं मानिसको लर्को छ । उनीहरूको समय चोरेर एमिकसलाई दिनुपर्ने कारण के हो ? त्यसको औचित्य देखिनुपर्छ ।’